‘दाई म पनि अस्ट्रेलिया आउँदै छु - सिद्धार्थ पौडेल | Jukson
‘दाई म पनि अस्ट्रेलिया आउँदै छु । भिसा लागिसक्यो । के के ल्याउन पर्छ एसो भन्दिनु न ।’ मैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने दाईहरूलाई सोधेका कुराहरू हुन् यी । जवाफ— दैनिक चाहिने समान ल्याऊ । एउटा कालो पेन्ट र कालो जुत्ता हाल्न चाई नबिर्सनु है ! ठुलै मान्छे बन्ने र पुन नेपाल फर्कने सपना सहित आइयो अस्ट्रेलिया । अब यताको कुरा त कति गर्नु, धेरै कुरा पहिलो पटक देखिदै, भोग्दै र अगाल्दै दिनहरू बित्दै छन् । सुरुमा कतै नेपाली जस्तो देख्यो त बोल्न मन लाग्ने । कहाँ को भनेर सोध्न मन लाग्ने । सोधियो पनि धेरै जनालाई । अनि खै किन हो कुन्नि नेपाली दाजु—भाई, दिदी—बहिनीहरूलाई काठमाडौँबाट भने पछि ठुलै मान्छे भन्ने लाग्दो रहेछ क्यारे ! बागमती अञ्चल त के कुरा गर्नु पुरै मध्यमाञ्चल जता भए पनि काठमाडौँ भन्ने चलन रहेछ ।
अर्को कुरा, यहाँको जिबन शैली । मैले देखेको प्राय सबै जनाको २ वटा लाइफ हुँदो रहेछ । एउटा कामको र अर्को चाहिं बिदेशी लाइफ (जुन नेपालमा हुने लाई लाग्दछ) । आएको २÷४ दिन बाटै बुझियो त्यो कालो पेन्ट र कालो जुत्ता ल्याउनु को अर्थ । सरसफाईमा ध्यान दिन पर्ने ठाउमा काम गर्न चाहिं कालो पेन्ट र कालो जुत्ता अनिबार्य रहेछ । हुन त यस्तो कुरा गर्दा राम्रो नहोला, तर जुन ठाउँ मा दिशा गरेर धुनुको सट्टा पुछेर हिंडछन तेइ ठाउमा सबै भन्दा धेरै सरसफाई गर्न पर्दो रहेछ । जति कुरा गरे पनि प्रायः हामी नेपालीहरूले पहिला गर्ने भनेको काम चाई क्लिनिङ्ग नै हो । चाहे भाँडा होस् वा अरु कुनै कुरा । यहाँको बाताबरण नै यस्तो छ कि जति गर्दिन भने पनि केहि नगरी बस्न नसकिदो रहेछ । हुन त पुगे पो बस्ने केहि नगरी ! आफ्नो खर्च धान्नको लागि मात्र भएपनि काम गर्नै पर्छ यहाँ । नेपालमा जस्तो पैसा सकिदा कराउने र माग्ने ठाउँ नै कहाँ हुन्छ ? सबै भन्दा महँगो एजुकेशन, एकोमोडेशन र ट्रान्सपोटेसन (शिक्षा, बसाई र यातायात) जुन कुरा तिर्दिन भनेर सुखै छैन । खासमा भन्नु पर्दा नेपालमा डुलेर, बाउ आमालाई नटेरी हिड्नेहरूले सबक सिक्ने ठाउँ रहेछ अस्ट्रेलिया । तर जिवनलाई संघर्ष मान्नेहरुका लागि भने अवसर को खानी हो अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलिया आफ्नो गन्तब्य किन बनाए ? किन आए, भन्ने कुरा जान्न मन छैन मलाई । भनिन्छ, भगवानको कथा र मान्छेको व्यथा कहिल्यै पनि सकिदैन ।
अर्को बुझ्न पर्ने पाटो भनेको, यहाँ आफ्नासगै धेरै डराउन पर्दो रहेछ । मतलब अरुले भन्दा नेपालीले नै नेपालीलाई हेप्ने र ठग्ने । पहिला काम पाउन गाह«ो, पाए पछि पैसा नपाईने भन्ने डर । सुरुबाटै काम गरेर सबै पैसा पाउने मान्छे मैले यो ४ महिना सम्म भेटेको छैन । जसको म आँफै पनि एउटा पात्र हुँ । केहि पाठ, केहि अनुभव र धेरै आशा बोकेर अर्को अझै राम्रो काम खोज्दा खोज्दा ४÷५ महिदा बित्दो रहेछ । भावनाका कुरा गरेर यसलाई झन् लामो नबनाउँ । हेमन्त रानाको ‘लैजा रे’ भन्ने गितले सबै कुरा भन्छ हाम्रो कुरा ।
काम र पढाई पछि गरिने रमाईलोको कुरै नगरौं । बाँधेर राखेको कुकुरको साङ्ग्लो फुकाल्दा पुरै गाउँ डूले जस्तो । अर्को कुरा यहाँ तैले एस्तो गरिस, वा कसैले घरमा भन्देला भन्ने डर पनि भएन, अनि त किन रोकिनु छ ? घर परिवारको बन्देजबाट स्वतन्त्र र आफैले कमाउन सक्ने भएपछि रमाइलो गर्न झन् सजिलो । नेपाली बिद्यार्थीे घर देखि टाढा हुँदा कति धेरै स्वन्तन्त्र हुन्छन भन्ने प्रमाण हेर्न कुनै नेपाली इभेन्टमा जानै पर्छ । त्यहाँ छर्लंग देखिन्छ । जो जस सँग, जसरि हिडे पनि कसैलाई कसैको वास्तै हुँदैन । यहाँ केटा केटि सगै हिड्न भन्दा पनि केटि केटि वा केटा केटा सगै हिड्दा बढी शंका गर्दछन् । पैसा खर्च गरे पछि सबै कुरा पाइने ठाउमा अरु कुराहरूको त कुरै नगरौं, चाहना र पैसा हुन प¥यो बस् । नेपालमा भएका साथीहरूले फेसबुकमा रमाएका र घुमेका फोटोहरू राखेपछि हाम्लाई (परदेशी लाई) पनि दुखको कुरा किन हाल्न मन लाग्छ र ! आखिर दुःख देखाएर सत्रु लाई किन खुसि बनाउने ? यसरी नै महिना दिन को दुःख, एक दिनको रमाइलो सँग बिर्सेर उज्ज्वल भबिष्यको सपना देख्दै बित्दै छ हाम्रो अजिब लाईफ ।